Dhacdo argagax leh oo dhex martay lamaane Somaliyeed “Quursigu Qiil Ma-leeyahay” | Markacadey.net Facebook
Warka oo Video	6:28 pm » Magaalada Kismaayo oo caawa laba qeyb u kala qeybsan (Dagaalo oo xilli kasta la filanaayo) 6:18 pm » Madaxweynaha Puntland oo markale si kulul u weeraray Madaxda Dowladda Soomaaliya 11:56 am » Buuggi Jubbaland baalki ugu dambeeyay maanta ayaa la rogay 11:31 am » Dagaal khasaaro dhaliyay oo maanta Ciidamada Dowladda ku dhex maray Magaalada Muqdisho 10:26 am » WAR DEG DEG: C/naasir Seeraar oo dagaalo ku dhawaaqay iyo xaalada Magaalada Kismaayo oo kacsan 8:54 am » Ciidamada Dowladda Sierra Leone oo ku wajahan Degmooyinka Jilib iyo Bu’aale 8:25 am » Hawlgalo culus oo maanta ka soconaaya Xaafadaha Ceel Qaloow iyo Buulo Xubeey 8:18 am » WAR DEG DEG: Qarax xoogan oo ka dhacay Magaalada Baydhabo 8:11 am » Ciidamada Dowladda iyo Amisom oo weeraraaya Degmada Baraawe 7:17 am » Madaxweyne-yaasha Igad oo sheegay inaysan waxba kama jirin Doorashadii Axmed Madoobe By: Mastar // Apr 12 2012 at 2:00 pm // 5,696 Reads // Wararka Caalamka, Wararka Somalia Dhacdo argagax leh oo dhex martay lamaane Somaliyeed “Quursigu Qiil Ma-leeyahay” Share Tweet
Dhacdadaan ayaa waxay dhex martay lamaane Soomaaliyeed, waxaana lagu kala magacaabo Fa’iza iyo C/Qaadir, Faa’iza ayaa qisadaan ka sheekeysay, waxayna codsatay in laba jeer lagu soo celiyo, si inta badan dadka Somaliyeed ay u akhristaan.
waxan ku dhashay magaaladda Muqdisho sanadka markuu ahaa 1982-kii. Waxaan ku dhashay degmada Waaberi balse waxan ku soo bar-baaray degmada Xamar weyne, dugsigayga hoose dhexe waxan kusoo qaatay Xaawo Taako Iskuul. Balse balse waxbarashayda dugsiga Sare waxan kusoo qaatay Al massal Primary and Secondary School oo ku yaallay 21 Oktoobar ama aga-gaarka Kmg-4. sanadka markuu ahaa 2003-dii ayaa Alle wuxu qadaray Aabahay oo ku noollaa dalka Maraykanka inuu inoo dacwoodo aniga iyo dhamaan inta xubnood ee qoyskayna. Nairobi ayaa tagnay balse nasiib wanaag 5 bilood kadib waxaanu caga-dhigana Magaaladda Columbus ee gobolka Ohio. Waxaan durbadiiba bilaabay waxbarasho. Balse sanadkii 2004-ta ayaa waxa dhacday in’aan booqdo Habar-yartee oo ku nooleyd Mineapolis, Alla maxaa i geeyey. Alla maxaa igu watay, waa meesha i hor-seeday dhibaatadaan oo dhan in’ay i soo gaarto.
Si kastaba ha’ahaatee waan tagay, waxaan maalin maal maha kamid ah ayaa waxaa Jaamacad u raacay gabar ay dhashay Habar-yartee oo xilligaas dhiganeysay Jaamacadda, waxaa inagu soo leexday wiil ay aqoon fiican isku lahaayeen gabadha ay Habar-yartee dhashay, kaasoo ay jaamacadda wada dhigan jireyn. Wiilkii ayaa waxay wada hadleyn gabadhii, isagoo si kaftan ah igu yiri maxaa dhacay adiga wadaad miyaa tahay oo wiilasha maba salaantit miyaa?, anigoo aanan juuq iyo jaaq dhihin ayaa gabadhii u jawaabtay kuna tiri gabadhaan maba qososho ee ka leexo, markaas baan is-celin waayey oo halmar uu qura ayaan qosol ku dhuftay, xaqiiqdii weligee wiil kuma aanan hor qoslin haddii uusan waxba naga dhaxeyn, balse maalintaan maba aqaano sababta uu qosolka iga soo fakaday.
Hase yeeshee waan isbaranay aniga iyo wiilkii, wuxu i sheegay in C/qaadir ladhaho anna waxan u sheegay in Faa’iza la’idhaho. Teleefanada ayaa kala qoranay waxaa u soo laabtay magaaladda Columbus, xirir fiican ayaa ina dhex maray aniga iyo C/qaadir, dhaaxaa wada- sheekeysano jaceylkaynii waa uu sii xoostay. Waxaan wada soconay in ka badan 3 sano, weligee maanan weydiin Qabiilka uu ka dhashay sidoo kale isaga qudhiiso muusan i weydiin. Waxaan ku heshiinay inaan isguursano marba haddii aanu is-fahanay oo aanu iska helnay. Inta badan nolosheyda waxan kusoo qaatay magaaladda Muqdisho, misa-na Jaceylka aan u qaaday C/qaadir maanan arag weli wiil aan u qaaday. Xitaa waxan gaaray habeenkii haddii aan seexanaayo inaan ku seexdo anigoo codkiisa maqlaayo, cajiib Walee naf jaceyl haayo hawli kama dhamaato.
Sidoo kale C/qaadir qudhiisa wuxuu i sheegi jiray jaceylka uu iga helay in’uusan weli ka helin gabar kale.
Habeen habeenada kamid ah ayaa wuxu yimid magaaladdii aan ku noolaa, isagoo habeenkaas i sheegay Qabiilka uu dhashay, halka uu isna iga codsaday in’aan u sheego Qabiilkii aan ka dhashay, hase yeeshee waan u sheegay, weliba wuxu dareemay in’aan kasoo jeedo Beelaha Laheyb Sooco. Waxba Dareen ah kama aanan arag. Balse laba cisho kadib ayaa wuxu ku laabtay Magaaladda Mineapolis oo markii horeba uu ka yimid.
Wuxuu u tagay gabadhii ay dhashay Habar-yartee isagoo kala dul dhacay CAAY IYO AF LAGAADO tii ugu xumeyd. isagoo ku yiri Naayaa maxaad i bartay naag aanan aheyn Gayaankayga. Halka ay iyana isku difaacday, war maalintii aad inagu soo leexaneysay aniga miya ku dhahay inagu soo leexo ama gabadhaan baro ayan ku dhahay. Adeb malihid ee gabadhaas meel ay la’dahay maleh ee dhaqaaleyso ama si-tartiib ah iskaga fasax.
Laba habeen iyo maalin muusan i soo wicin, oo haddii aan waco teleefanka igama qabanaayo, sidoo kale gabadha ay habar-yartee dhashay maysan i soo wicin oo waxba maysan i sheegin oo way iga qarineysaa. Goor ay tahay habeen xilli danbe ah ayuu i soo wacay isagoo Abaalkayga ka dhacay Caay iyo in uu wax ka sheego Qabiilka aan ka dhashay, waa yaabanahay oo weli wax jawaab ah maanan siinin. Ugu danbeen wuxu igu yiri aniga iyo adiga isma-geyno ee Shimbirkaaga la-duul, halka aan aniguna ku danshay Teleefanii.
Waxaan sameyo garan maayo, aniga tayda meel iska dhigto, adiga oo ah akhristaha sheekadaan akhrisanaayo bal fikir tanoo kale haddii ay kuugu dhici laheyd walaalkey ama walaashey side baad noqon laheyd, Alla joogis adduun dhibaato badanaa.
Jaceylkiisa waxan ka qaaday xanuun fara-badan iyo cuqdad gooni ah. Haddii aan isdili lahaa si’uu xanuunka i dhaafo oo hadhow heli maayo meel aan ku bad baado oo haddii aan nafteeda jaro, in la’igu abaal gudi doono Cadaabtii Alle Subxanallah.
Iyadoo uu xaalka igu xun yahay ayaa waxaa i soo wacday gabadhii ay habar-yartee dhashay iyadoo igula talisay in’aan dib danbe ula hadlin C/qaadir bacdamaa uu sidaan ii galay.
Waxa arinkii u sheegay hooyadee oo awalba ogeyd inaan wada shekeysano C/qaadir iyo aniga halka uusan Aabahee waxba kala socon. Hooyo ayaa waxay igula talisay inaan faraha ka qaado maadaama uu sidaasi gartay. Ugu danbeen waxaan go’aaan ku gaaray in’aanan la sheekeysan wiil danbe wuxu doono ha-noqdoo, anigoo sugi doono inta calafkayga ka dhiman.
Intaasi ayey Faa’iza ku soo goobtay caashaqii xanuunka badnaa ee soo maray. Hadaba akhristaha sharafta lahow qisadaan darankayga maxay ku abuurtay.
Baabuur ayaan isla raacnay qacdii koowaad ayaan ku jeclaaday “Waa gabar taariikh ku dhacday” Qiso Xanuun badan:Jirkaaga ii hibeey ayuu i dhahay hadaad i jeceshahay ana waan isku dhiibay mana i guursan!!! Haweenay 10 Sano la qabay oo aan ninkeeda wax jaceyl ah ku hesay ayaa 10 sano kadin samaysay….. Qof aadan Wajigeeda Aqoon Maguursan Lahayd? Hadaba Sheekadani ku Cibrad Qaado. Walaalo Ka Lumay Dagaalkii 2aad ee Adduunka Oo Muda 75 Sanno Kadib Is Helay Gabar reer baadiye ah oo shaah kari inta la dhahay taariikh dhigtay!!! Waxaan kusoo Arkay Xarunta Nabad Sugida Muqdisho (Warbixin Kooban) Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of MARKACADEY.net. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards. comments